Shinoa mampiseho ny fahaizany | Hevitra MPANOHARIANA
Hi hi hi kozy sinoa zany no tena tao k'le.
Ary tsy matin-i jentilisa lolo mihitsy ny mpankafy baskety an.
Fa ny sinoa kosa aloha ny fahitako azy tena mahay @ io e. Tsisy resaka hoe hasard na improvisation mihitsy ny an-dry zareo. Raha araky ny mba novakiako tetsy sy teroa aza dia tena henjana mihitsy ny discipline @ ireny tarika teatralin-dry zareo ireny. I Jacky Chan dia anisan'ny voataiza tao @ Opera de Pekin, ary voalaza fa tsy somonga na an-jaza mihitsy (na dia zaza aza no voafantina miditra ao) ny fiainana ao. Rehefa mandinika ny sarimihetsika lalaoviny sy ny make-off aho ankehitriny dia hitako fa tena pro araky ny fiteny mihitsy lezalahy.
Mety misy lesona azo tsoahina ho antsika ihany @ fifehezantena eo @ fanatanjahan-tena ny fandinihana ny zavatra toy itony.
Nampidirin'i kwasi @ 13:43, 2007-09-11 [Valio]
Mahay teny shinoa angaha ry Shinoa any amintsika sa tsia?
Voatsikaritro amin'ny Malagasy ilay mahalala fomba be dia rehefa misy vahiny na iray ary eo dia miteny ilay tenin'ilay vahiny. Rehefa mivory ny Malagasy 20 ka misy Amerikana 1 dia miezaka miteny anglisy ny Malagasy, ilay Amerikana indray no menatra be.
Ny ahy aloha tsy raharahiako e, ny teny malagasiko lasa ho azy foana sisa satria hafahafa be ilay miteny anglisy tampoka teo. Ny hitako koa dia ry zareo Malagasy manambady vahiny tsy mahita Malagasy sy miteny malagasy matetika dia tsy taitra loatra amin'ny "fahalalana fomba" io fa dia hitanao faly be miteny malagasy eo, na dia tsy mahay miteny malagasy ary ny vadiny.
Nampidirin'i sipakv @ 15:37, 2007-09-11 [Valio]
aza fady tokony hoe Mahay miteny malagasy angaha ry Shinoa any amintsika ilay teo ambony.
Nampidirin'i sipakv @ 15:38, 2007-09-11 [Valio]
Na ahoana kosa aloha na ahoana dia miezaka ny miteny malagasy araka izay tratra ireto Shinoa ireto e! Fa rehefa hitany fa izy no maro an'isa kokoa dia ny teniniy ihany no ampisainy.
Tao amina oriansa iray izao hitako fa mifangarongaro teny ry zalahy miezaka ny ho azo. Raha manonona isa izy dia tonga dia amin'ny teny frantsay satria tsy fanisana gasy manko na dia ny gasy aza.
fa rehefa mamaly azy ireo mpiasany tao dia amin'ny teny malagasy ihany. Iny indray aloha mba hitako. Tsy mahay teny frantsay (ary na dia anglisy akory aza) ny Shinoa vaovao ka tsy aleon'ny mpiasany tonga dia miteny malagasy?
Nampidirin'i jentilisa @ 16:06, 2007-09-11 [Valio]